Anio, dia hisy ny asam-baomiera handinihana ny volavolan-dalàna n°015/2017 tamin`ny 13 jona 2017 momba ny fanagiazana ny harena tsy ara-drariny. Ny alatsinainy 24 desambra ho avy izao kosa ny fandaniana izany amin’ny fivoriana tambaram-be azon`ny daholobe atrehina. Ny alarobia 26 desambra 2018 dia asam-baomiera handinihana ny volavolan-dalàna n°054/2017 tamin`ny 28 desambra 2018 mahakasika ady amin`ny famotsiam-bola sy famatsiana asa fampihorohoroana izay holaniana amin’ny fivoriana tambaram-be azo atrehina ny alakamisy 27 Desambra 2018. Ny zoma 28 desambra 2018 amin’ny telo ora folak’andro ny lanonana famaranana izao fotoam-pivoriana tsy ara-potoana izao. Tonga nanatrika ny ireo solontena avy amin’ny governementa. Omaly maraina kosa dia nisy ny lanonana fizarana fanomezana ho an’ireo mpandraharaha eo amin’ny Antenimieram-pirenena noho ny fahatongavan’ny Krisimasy sy ny fetin’ny faran’ny taona ka nanolotra fanomezana azy ireo ny ny filoha sy ny birao maharitra ho an’ny mpandraharaha tsirairay avy. Tamin’ny kabary fohy nataon’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Jean Max Rakotomamonjy, notronon’ireo solombavambahoaka maromaro no nisaorany ny rehetra tato amin’ny Antenimieram-pirenena tamin’ny fanatontosana an-tsakany sy an-davany izao fe-potoana fanaovan-dalàna izay madiva hifarana izao. Nirary fahombiazana sy fahasoavana ho an’ny tsirairay avy izy ary nirary Krismasy sambatra sy taom-baovao mamiratra ho an’ny Malagasy rehetra.